यी १० सपना जसले तपाइँलाई धन प्राप्तीको संकेत गर्छन् ! - Sidha News
यो पनि पढ्नुहोस्: कसैलाई सुनाउन नहुने सपनाहरु हेर्नुहोस् ! यी ५ सपनाहरु झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाऊनुस् !
१.आफूलाई मृ’त अवस्थामा देख्नु भएमा
३. सानो माछा देख्नु भएमा
४. साँप देख्नु भएमा